Chelsea oo kooxaha Man United iyo Liverpool kula dagaallameysa laacib ka tirsan Atletico Madrid – Gool FM
Chelsea oo kooxaha Man United iyo Liverpool kula dagaallameysa laacib ka tirsan Atletico Madrid
Ahmed Nur July 26, 2021
(London) 26 Luulyo 2021. Kooxaha kubadda cagta Liverpool iyo Chelsea ayaa u muuqdo kuwa ku cadcad loollanka loogu jiro saxiixa xiddiga Atletico Madrid khadka dhexe kaga ciyaara ee Sual Niguez kaasoo haatan u muuqda mid kasii baxaya maanka Manchester United.
26-sano jirkan khadka dhexe ka ciyaara ayaa caddeeyay inuu qorsheynayo ka tagista Wanda Metropolitano Stadium xagaagan xilli uu La Liga kula guuleystay naadigiisa fasal ciyaareedkii tagay, se lumintan booskiisa joogtada ah ayaa ku riixeysa inuu ka dhaqaaqo Madrid.
Si kastaba ha ahaatee, Liverpool iyo Man United ayaa ku loollamayay saxiixa xiddigan maadaama Reds ay lumisay xagaagan Georginio Wijnaldum oo bilaash ugu biiray Paris Sain-Germain isla markaasna PSG ay dooneyso soo qaadashada Pogba oo Red Devils ka tirsan.
Balse wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya inuu macallinka Blues ee Thomas Tuchel oo daneynayo saxiixa Saul sidaas darteedna, Chelsea ay ku dagaallami doonto saxiixa xiddiga reer Spain.
RASMI: Neymar Jr iyo Barcelona oo soo gaba-gabeeyay dagaalkoodii maxkamadda